China PETG Mirror ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
Ishidi le-PETG Mirror linikeza ukwenziwa okuguquguqukayo ngamandla omthelela omuhle, ukuguquguquka okuhle komklamo nesivinini sokwenza izinto. Ilungele amathoyizi ezingane, izimonyo nezinto ezisehhovisi zezingane.
• Kutholakala kumashidi angama-36 ″ x 72 ″ (915 * 1830 mm); ngokwezifiso osayizi etholakalayo
• Kutholakala ngogqinsi luka-.0098 ″ kuye ku-.039 ″ (0.25mm -1.0 mm)
• Kutholakala ngombala wesiliva ocacile
• Kuhlinzekwe nge-polyfilm masking, upende, iphepha, i-adhesive noma i-PP backcover
High Gukulahlekelwa I-PETG Ishidi Lesibuko, I-PETG Plastic Mirror Sheet
Isibuko se-PETG Ukwenza ishidi kungumbhede wepulasitiki ohlukahluka kakhulu ovame ukusetshenziswa kakhulu kwezobunjiniyela, izimonyo, iziqukathi zokugcina, nokuningi njengoba kwenziwa kalula nge-thermoformed futhi kusikwa ukudala ubujamo obuyinkimbinkimbi ngemininingwane eqondile. Isibuko se-PETGinikeza izinzuzo ezahlukahlukene ezivela ekucaceni okuphezulu, ukugcinwa kwe-gloss surface, ukungabi mhlophe kokucindezeleka, ukwamukela uyinki nopende, futhi kuvunyelwe i-FDA yokuxhumana kokudla. Ishidi le-PETG Mirror linikeza ukwenziwa okuguquguqukayo ngamandla omthelela omuhle, ukuguquguquka okuhle komklamo nesivinini sokwenza izinto. Isibuko sethu se-PETG silungele amathoyizi ezingane, izimonyo nezinto ezisehhovisi zezingane. Sinobukhulu obungu-0.25 ~ 1 mm, usayizi ka-915 * 1830 mm, umbala ocacile wesiliva otholakalela ukuhleleka ngezinsizakalo ezisikiwe zosayizi.
Izinzuzo zePETG Mirror
Ishidi le-PETG Mirror linikeza ukwenziwa okuguquguqukayo ngamandla omthelela omuhle, ukuguquguquka okuhle komklamo nesivinini sokwenza izinto.
Isibuko se-PETG asilula futhi siyashintshashintsha. Kubuye kuthinte umthelela futhi kuqine kunengilazi yendabuko. Isibuko se-PETG sinikeza izinzuzo ezahlukahlukene ezivela ekucaceni okuphezulu, ukugcinwa kwe-gloss surface, ukungabi mhlophe kwengcindezi, ukwamukela uyinki nopende, futhi kuvunyelwe i-FDA yokuxhumana nokudla. Ngenxa yokuqina kwale sheeting ye-acrylic, izibuko ze-PETG zilungele izibuko zangasese, izibuko zokwenza izimonyo, nethoyizi lezingane.
Igama lomkhiqizo Ishidi Eliphezulu le-PETG Mirror Sheet, i-PETG Plastic Mirror Sheet
Izinto Izinto ze-Polyethylene Terephthalate Glycol
Umbala Sula isiliva
Usayizi 915 * 1830mm, ukusika ngokwezifiso usayizi
Ubukhulu 0.25 - 1.0 mm
Ukufihla Ifilimu le-PE
Ukusetshenziswa Imikhiqizo yeshidi lesibuko sepulasitiki
Izici Impact ukumelana, nezimo, Eco-friendly, Child ephephile
Isicelo Amathoyizi Wezingane, izimonyo, nempahla yasehhovisi
Surface ngephepha le-carft noma ifilimu le-PE
Emuva ngephepha noma okunamathelayo ohlangothini oluphindwe kabili
Swayipha ngepallet yokhuni noma ibhokisi lokhuni
IZIMPAHLA ZOMZIMBA NEZOKWENZA AMAKHEMIKHALI
Isimo Somzimba: Amashidi wesibuko aqinile
Indawo Yokuncibilika: Ayitholakali
Indawo yokubilisa: Ayitholakali
Ukushisa kokubola: 716 ° F (380 ° C) approx ..
I-Flash Point:> 842 ° F (> 450 ° C)
Ukushisa okuzenzakalelayo: 880 ° F (471 ° C)
Imikhawulo yokuqhuma: Ayitholakali
Isilinganiso Sokuhwamuka: Akusebenzi
Ingcindezi Yomhwamuko: Ayisebenzi I-Vapor
Ubuningi obuhlobene: 1.27
Ama-PETG mirror sheet alungele ukusetshenziswa ekwenziweni kwamathoyizi ezingane, izimpahla zasehhovisi nokusetshenziswa kwezimonyo. Izicelo ezijwayelekile zifaka:
• Amathoyizi Wezingane
• Ukusetshenziswa kwezimonyo
• Izinsiza zasehhovisi
• Idizayini engadini
• Isibuko sokuphepha
• Khombisa imikhiqizo
• I-POP ephezulu yethebula
I-DHUA ingumkhiqizi wekhwalithi wezinto ezihamba phambili ze-acrylic (PMMA) eChina. Ifilosofi yethu yekhwalithi ibuyele ku-2000 futhi isilethele idumela eliqinile. Sinikeza ngezinsizakalo zobungcweti kanye ne-One-Stop kumakhasimende ngokuqeda yonke inqubo yokukhiqiza yokwenza ishidi elisobala, i-vacuum plating, ukusika, ukubumba, i-thermo eyakha ngokwethu. Siyaguquguquka. Sinikeza umkhiqizo nezinsizakalo ezenziwe ngezifiso ukukhulisa ukwaneliseka kwamakhasimende. Yonke imikhiqizo yethu itholakala ngosayizi wangokwezifiso, ubukhulu, imibala kanye nokubunjwa kwe-ect. Siyakuqonda ukubaluleka kokulethwa kwezikhathi zokuhola kumakhasimende ethu, abasebenzi bethu abanamakhono, ithimba labasebenza ngokuzinikela, izinqubo ezilula zangaphakathi nokuphathwa kahle kusisiza ekuqinisekiseni ukuthi sikwazi ukufeza izithembiso zethu zokulethwa kwezinsuku eziyi-3-15 zokusebenza ngokushesha.
amaphepha epulasitiki eguquguqukayo
ishidi eliphakeme lesibuko sephepha lesibuko
isibuko sephepha lepulasitiki eliguquguqukayo
petg mirror amashidi ingcina
Petg plastic mirorr ishidi
Isibuko sepulasitiki sePETG